musha Africa Singers Zlatan Ibile Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeNaija Celeb ane zita chairo "Omoniyi Temidayo Raphael“. Yedu Zlatan Ibile Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hongu, munhu wese anoziva nezveye catchphrase yake "Kapaichumarimarichopaco". Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Zlatan Ibile's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Zlatan Ibile Yehucheche Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Omoniyi Temidayo Raphael akaberekwa pazuva re19th raDecember 1994 kuna amai vake nababa, Mr / Mr. Omoniyi mudunhu reLagos, Nigeria. Iye ndomumwe wevana vazhinji akaberekerwa kuvabereki vake avo ruzivo rudiki runozivikanwa nezvake.
Nyika yeNigerian yekumavirira-Africa dzinza rinobva kuEkiti State uye ine mhuri yekwaMakristu mhuri yavo yakadzika midzi kunharaunda yekare yeYoruba. Akarererwa mudunhu reLagos aine vanin'ina vake uye ruzivo rwake rwunonyanyozivikanwa.
Semukomana mudiki, Zlatan haana kusimudzira chero chinzvimbo mumimhanzi, aive aine shungu nezve kuita kwake zvedzidzo uye anoedza kuona kuti anodzidza zvakanyanya kuitira kuti rimwe zuva ave hunhu hukuru muNigeria.
Aive mukomana wekuchechi airidza ngoma uye aive neruzivo rwemimhanzi.
Zlatan Ibile Dzidzo Uye Basa Rokuvaka:
Zlatan Ibile akatarisa pazvidzidzo zvake uye akatanga kukudziridza kufarira mimhanzi pakupedza kwake Senior Sekondari Chitupa Bvunzo muna 2011.
Paakamirira nemoyo murefu kuti apinde muUniversity, anowanzo tevera shamwari dzake ku studio.
Sezvo Zlatan aipedza nguva yakawanda mu studio, akabva anyura zvakanyanya munyika yemimhanzi.
Akapihwa ropafadzo dzinoverengeka dzekuimba pamwe neshamwari dzake dzaakatambira nemufaro uye nekudaro genesi remumhanzi basa rake rakatanga.
Zlatan Ibile Kurapwa Kwepakutanga Hupenyu:
Nguva pfupi yapfuura chiitiko chemumhanzi chaZlatan pa studio, akawana mukana wekudzidza Bhizinesi Rekutungamira paMoshood Abiola Polytechnic.
Ino nguva yakatenderedza, Zlatan anga asingade kuregeredza mimhanzi uye kutarisisa chete kuvadzidzi vake pachinzvimbo akaisa kuyedza kukuru kuti vabudirire mumimhanzi pamwe nevadzidzi vake.
Ndichiri kudzidza pachikoro chepamusoro, Zlatan akatanga kusimudzira tarenda rake remimhanzi nekurova muzvirongwa zvakasiyana zvaive zvakarongeka muchikoro chake.
Kuita kwake kwaive kwakanaka zvekuti kwakamuwanisa mukurumbira pasina nguva iri kure. Akaenderera mberi nekutora mukana mumakwikwi erap akarongwa neAirtel muna2014 - One Mic Campus Tour - uye akabuda akahwina mumakwikwi pazera remakore gumi nemapfumbamwe.
Zlatan Ibile Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Iwo mufaro usingatsanangurike wekuhwina makwikwi pazera diki akawana Zlatan achifunga nezve mukana wekukuita hukuru muindasitiri yemimhanzi.
Kwaari, kuwana budiriro huru mumimhanzi kwaigona kungokwanisika nekudzidzira kwakadzama uye kuzvipira, saka akashanda zvakaomarara kuti azvigadzirise mumhanzi.
Nekuda kwechirongwa chinonetesa chezviitiko zvake zvedzidzo, Zlatan akasangana nedambudziko rekuenzanisa zvidzidzo zvake nemimhanzi yake sezvo zviitiko zviviri izvi zvaida nguva.
Aifanira kusangana nehurukuro, migove, bvunzo uye zvimwe zvirongwa pamwe nekunyora nziyo uye kudzidzira mamwe ematanho ake ekutamba.
Zlatan Ibile Biography - Simuka Mukurumbira Nhau:
Kuedza kwaZlatan Ibile hakuna kuitwa pasina nekuti aikwanisa kupedzisa zvidzidzo zvake mubazi repamusoro pamwe nekuve anoremekedzwa mumhanzi icon uyo akanyora nziyo dzake mumutauro wechiYoruba.
Akange asina kungokudziridza hunyanzvi hwake hwekumimhanzi asi aive awedzerawo kutamba kwake uye kuita hunyanzvi, nekudaro, achibatsira zvakanyanya mukugadzirwa kwaChinko Ekun's "Anokwanisa Mwari".
Zlatan akasimuka kuita mukurumbira mu2017 zvichitevera kuburitswa kwemugwagwa wake Jam "Muviri Wangu" wairatidza mimhanzi inozivikanwa - Olamide.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora, Zlatan Ibile inyanzvi yemimhanzi muimbi anozivikanwa nhanho dzake dzekutamba dzakakurumbira, Zanku (Legwork) iyo yakaenda hutachiona ichigumisa kutonga kwevakakurumbira Shaku Shaku maitiro uye pendi wave yekuburitswa kwerwiyo rwake yakanzi Zanku.
Pamusangano we2019 weAll Africa Music Awards (AFRIMMA), iyo Iconic superstar yakahwina mibairo mitatu inoti; Yakanakisa kubatira Mubayiro, Yakanakisa Nyowani Mutemo, uye Rwiyo rweGore Mubairo. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Zlatan Ibile Hukama Hupenyu Hwako Chokwadi:
Nezve hukama hwaZlatan Ibile Hupenyu, haasati akaroora panguva yekunyora. Zlatan Ibile anga achinzi ane runyerekupe rwekuita hukama hwekudanana naSeyi Awonuga.
Akasimbisa runyerekupe rwechokwadi achiti Seyi ndiye mucheche wake, waanoshanda naye mubhizinesi, munin'ina wake pamwe nezvose zvake.
Achitaura zvese izvi akaburitsa pachena kuti kunyangwe iye ari mucheche wake, iye anewo vasikana pasirese. Izvi zvakamutsa makakatanwa nemibvunzo maererano nemusikana waZlatan Ibile.
Seyi Awonuga anove wechidiki CEO weBang Mewsic Entertainment anonzi akatendwa kuti akasaina murapi wemuimbi.
Iye anga ari musikana wenguva yakareba waZlatan Ibile akachinja mwana amai sezvo shiri dzerudo-dzaigamuchira mwana wavo muna Chikumi 2019.
Seyi Awonuga akange akagovana pikicha yake akabata mucheche mumawoko ake nemusoro unoti: "Mwana waZlatan" Zlatan Ibile akataura achiseka achiti, "Ndiani ave amai abeg?".
Zlatan Ibile Hupenyu Hwemhuri:
Zlatan Ibile anobva kumhuri yepakati yemhuri. Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba naamai vaZlatan Ibile:
Kunyangwe hazvo ave mukurumbira wemumhanzi, Zlatan Ibile haana kuburitsa ruzivo rwakawanda pamusoro paamai vake nababa kune vezvenhau.
Akanga angotaura mubvunzurudzo kuti baba vake mufundisi muChechi Yekununura Chechi yaKristu.
Mazita evabereki vaZlatan Ibile haana kutaurwa mune ruzivo rwese rwakanyorwa nevezvenhau nezvake.
Nezve hama dzaZlatan Ibile uye hama:
Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezve hama dzaZlatan Ibile nehanzvadzi. Kubva paakasimukira kuva nemukurumbira uye mune zvese zvinyorwa zvake zvepamutemo, Zlatan Ibile haana kutaura mazita evanun'una vake uye haana kana chaakataura maererano nehunhu hwavo.
Zvakare, hapana ruzivo rwakawanda rwunozivikanwa nezveasekuru naambuya vaZlatan Ibile pamwe nambuya nasekuru nasekuru vake.
Zvakare, kwanga kusina magwaro epamutemo kana kutaura pamusoro pababamunini vake, vanatete, babamunini, babamunini, nasekuru.
Zlatan Ibile Hupenyu Hwega:
kure nekuyedza kwaZlatan Ibile, tinokuunzira chokwadi nezvehunhu hwake kuti akubatsire kukupa mufananidzo uzere wake.
Kutanga, Zlatan Ibile persona musanganiswa weSagittarius uye akanyatsoratidza hunhu hwehunhu hwake hweZodiac.
Iye ane tariro, anofarira uye anofarira kuita zvinhu nenzira yake yakasarudzika. Zlatan Ibile mutsigiri wepamoyo uyo ane zvido zvake uye zvido zvake zvinoenderana nesangano.
Akange apa chipo chemari inosvika mamirioni mashanu neshanu kumusikana mudiki anopenya - Boye - uyo akanyorwa achiimba mazwi erwiyo rwake, Ninu Aye.
Zlatan Ibile Mararamiro:
Zlatan Ibile mambure akakosha anofungidzirwa kunge ari mari yekukwereta yemadhora mazana masere ezviuru panguva yekunyora.
Kwakatangira hupfumi hwake kunonyanya kubva pakuedza kwake kwemimhanzi uye chibvumirano chekubata naLotto9ja apo ongororo yemashandisiro ake inoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Iyo iconic superstar zvakare ine ruzivo rwakasiyana-siyana mubhizimusi rezvivakwa uyezve yakatora kune yayo rezvenhau peji kuratidza imba yake yakanaka pamwe nemaviri emota dzake dzekunze dzaakatenga mu2019.
Akaita kutenga Benz CLA Class mota yekunze mwedzi mumwe chete mushure mekunge aratidza hupfumi hwake hwekare.
Zlatan Ibile Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Zlatan Ibile humwana nyaya uye biography, hezvino zvimwe zvishoma kana zvisinga zivikanwe chokwadi pamusoro pake izvo zvinokubatsira iwe kuti utore mufananidzo wakazara wake.
Zlatan Ibile akasungwa pamwe naNaira Marley, Rahman Jago, nevamwe vaviri pazuva regumi regumi ra Chivabvu 10 neEconomic and Financial Crimes Commission (EFCC) vachipomerwa mhosva yekuita hutsotsi hwekuNigeria hwekuInternet - yahoo yahoo. Mazuva mashanu mushure mekusungwa kwake muLagos, akapiwa rusununguko rusununguko neEFCC.
Zlatan Ibile haana kusiiwa kumashure kana zvasvika kune nyika yematatoo. Aive akinki ma tattoo mazhinji pamuviri wake uye anga achangobva kuisa inki kumakumbo ake panguva yekunyora. Chiso icho chakange chakaiswa inki pamakumbo ake chakafanana nechiso chaZlatan.
Zlatan Ibile akaberekerwa mumusha wechiKristu uye anosimudzira kutenda kwake muna Mwari. Kunyangwe baba vake vari mufundisi muRedeem Christian Church yaKristu, Zlatan Ibile haasi mukomana mukomana wechechi sezvo aiti iye haana kupihwa mvumo yekutevera gwara rakatorwa nababa vake.
Zlatan Ibile anoputa mbanje uye haana hanya nekunzwa pfungwa dzaveruzhinji nezvemaitiro ake ekusvuta nekumwa doro. Munguva yekusungwa kwake muLagos, nekudada akatora mupendero wechiputa ndokuutsiva pamberi pemapurisa ake.
Thanks for reading vedu Zlatan Ibile Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!